အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: သစ် သား... သစ် ပင်..!
WAY way for where, WHERE where is there, THERE there can know, KNOW know to love, LOVE love for life, LIFE life of way, WAY isamoment, likeaDisplay , with missing mind & me.
သစ် သား... သစ် ပင်..!
ကျွန်တော်တို့နဲ့ ခွဲခွာလို့မရတဲ့ သက်ရှိမိတ်ဆွေတွေလား.. သက်မဲ့ မိတ်ဆွေတွေလား... ။
ကာလ ဒေသအလိုက်.. ခိုင်ခံမှုတွေအတွက်ရော.. အသုံးတော်ခံမယ့် နေရာတွေရော ကွာခြားသွားမှာပါ...
နည်းပညာအရ လိုက်နာရမယ့် သဘောတရားတွေ...
သဘာဝအရ အမျိုးမျိုးအထွေထွေ ရှိတဲ့ သဘောတရားတွေ....
သုံးသူရဲ့ သဘောကို စောကြောလိုက်ရင်ဖြင့်
ကျွန်တော်တို့နဲ့ ခွဲခွာလို့မရတဲ့ သက်ရှိမိတ်ဆွေတွေလား.. သက်မဲ့ မိတ်ဆွေတွေလား...
သူတို့ရဲ့ ရုပ်ဝတ္ထု ဂုဏ်သတ္တိတွေ...
သူတို့ရဲ့ မမြင်ရတဲ့ စွမ်းအားတွေ...
သဘာဝက ပေးထားတဲ့ အစွမ်းလား...
[စကားချပ် - ၁ ...။
သစ်တွေထဲမှာ ဘယ် အမျိုးအစားက အလှဆုံး..။ ဘယ်အမျိုးအစားက အခိုင်ဆုံး၊ အမာဆုံး..။
ဘယ်အမျိုးအစားဆိုရင်ဖြင့် ပေါလစ်ရ်ှလေး သုတ်လိုက်ရင် ဘယ်လို...
ဘယ်အမျိုးအစားဆိုရင်ဖြင့် သဘာဝအတိုင်းထားရင် ဘယ်ပုံ...။
ဘယ်အရောင်ကို သုတ်လိုက်ရင် ဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်..
ဘယ်လမ်းအတိုင်း လွှထိုးလိုက်ရင်ဖြင့် ဘယ်ထုသားကို ရလာမယ်...။
ဘယ် ဒု၊ ဘယ် ဆိုဒ် ဟာကိုဖြင့် ဘယ်နေရာမှာ သုံးကြတယ်..။
အမိုးအကာအဖြစ်လား…။ အသုံးတော်ခံ ပရိဘောဂလား..။
ဘယ် ဒု ဘယ်ဆိုဒ်ဟာဖြင့် ပုံသေထားကြတယ်..။
ဘယ်အမျိုးအစားဟာဖြင့် တန်းဝင်ပြီး ဘယ်အမျိုးအစားဟာဖြင့် ဈေးမြောက်လွန်းတယ်...။
ဘယ်အမျိုးအစားဟာဖြင့် ပွယောင်းယောင်းဖြစ်ပြီး ဘယ်အမျိုးအစားဟာဖြင့် ကျစ်လစ်သန်မာတယ်.။
ဘယ်အမျိုးအစားဟာဖြင့် ကျွတ်ဆတ်တင်းလွန်းပြီး ဘယ်အမျိုးအစားဟာဖြင့် ကွေးညွှတ်ပျော့ပြောင်းတယ်...။
ဘယ် သစ်မျိုးဟာ ဘယ် ဒေသမှာပဲ ရပြီး ဘယ်သစ်တွေကိုတော့ဖြင့် မသုံးတာ ကောင်းလိမ့်မယ်..။
ဘယ်သစ်သားဟာဖြင့် အနှောက်အယှက်တွေကို ကင်းကွာစေပြီး ဘယ်သစ်ပင်ကိုဖြင့် ရိုးရာအရ ပူဇော်တယ်...။
ဘယ်သစ်ပင်ကို ခုတ်ရင် ဘယ်လို ခုတ်ရပြိး ဘယ်သစ်ပင်ကဖြင့် ဘယ်လို ဖြတ်ရမယ်..။
ကျွန်တော်တို့နဲ့ ခွဲခွာလို့မရတဲ့ သက်ရှိမိတ်ဆွေတွေလား.. သက်မဲ့ မိတ်ဆွေတွေလား... ။]
[စကားချပ် - ၂ ...။
ဝေးကွာနေတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ သစ်သားတွေကို သတိရတာကတစ်ကြောင်း rooney wayne ရဲ့ ပို့စ်ကို ဖတ်မိတာက တစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် အစီအစဉ်မကျတဲ့ အတွေးတွေကို ရေးမိပါတယ်..။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ သစ်လောကအကြောင်း သင်ပေးခဲ့တဲ့ ဖခင်ကိုလည်း သတိရလိုက်ပါတယ်..။ သစ်သားတွေရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ၊ သစ်တွေရဲ့ သဘောသဘာဝ၊ သစ်တွေရဲ့ အစွမ်းတွေအပြင် သစ်လောက က စီးပွားရေး သဘောတရားတွေကိုရောပေါ့...။ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့သာ မဟုတ်ပဲ... သာမာန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ တွေးမိပါတယ်..။
Posted by ဂျွန်မိုးအိမ် Labels: ကဗျာ_အတွေး
in love with TWITTER.
Mirror life of John Moe Eain
Turkey and me
Steel Structure ကို လေ့လာခြင်း
Sustainable History of Tall Building
ဟင်းလင်းခွင် နှင့် အတွေး
life in DINNING - 1
အိမ် မဟုတ်တဲ့ နားနေဆောင်လေးတွေ...။
နံ ရံ များ အ တွင်း မှာ . . . . . . . . ။
ဘ၀ လှေကား ။
စိ မ်းလ န်းေ သာက မ္ဘာ။
သက်ဝင် ခံစား ပရိဘောဂများ
Super Potato Concept
The Heart of the Home -2
CP 83 အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
‎ဤ Blog ရှိ Post များ​ထဲ​မှေ​ရး​သားချ​က်
အြ​ပ​ည့်​အစုံ (သို့​​မ​ဟု​တ်) တစိတ်တ​ပို​င်း​ကို
အကျိုး​အြ​မ​တ် တ​စုံ​တ​ရာ အလို့ငှာ
မဟုတ်ပါဘဲ မည်သ​ည့် media တွ​င်မ​ဆို
ြ​ပန်လ​ည် ကူး​ယူေ​ဖာ်ြ​ပ​လို​ပါ​ကြ​ဖ​စ်ေ​စ၊
ကိုး​ကားလို​ပါ​ကြ​ဖ​စ်ေ​စ ကျွ​န်ေ​တာ့်​ထံ​မှ
ခွ​င့်ြ​ပုချ​က်ေ​တာ​င်း​ရ​န် မ​လို​အပ်ပါ။
အမ​ည်၊ ဤ Blog အမ​ည်၊ မူ​ရ​င်း Post
အမ​ည် များ​ကို​သာ Credit အေ​နြ​ဖ​င့်
HAPPY GOOD LUCK TO YOU ALL!!!
if can't read,
Please check Unicode.at myanmarlanguage.
Please download ZAWGYI font. HERE!
Brothers & Sisters :)
inside : outside
Bukit Timah တောင်ခြေအနီးက granite ကျောက်များအား ဖောက်ခွဲခြင်း
Chit Tee's Note
YoeYar CG Blog
Australia Myanmar Youth Community
မြန်မာတို့ရဲ့ မြန်မာ့ ကောင်းကင်
မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်း
they & their home!
သာတူညီမျှကမ္ဘာ (Harrison Bergeron)
ရန်ကုန်မြိျု့နှင့် ထိတွေ့ခြင်း (၁)
Bed room Window
ဖွင့် ဟ ၀န် ခံ ၍ မ ရ သော...
ကြေကွဲခြင်းတွေကို နေ့စဉ်အာဟာရလို မျိုချရတော့ရော
Poet, poetry, film and literature review.
my pleasure to visit
thoughts and questions on terrorism in barcelona.
A dose of Generation Z
Mengapa Baju Renang Anak Perempuan Frozen?
Tomato or dance
2016: Lessons in Freelancing
Enigma of the Hour
Autodesk SBD workshop
BIM and Softwares
All Thing Bim
Inspirational Home & Interior Design Ideas
Improve & Decorate your home to make tiabetter place to live..
If you want, you can visit!
တဖြည်းဖြည်းနဲ့.. ရေးရေးခဲ့တာလေးတွေ May (1) August (1) June (1) May (1) April (2) March (2) February (2) December (1) October (2) September (4) August (3) May (1) April (3) March (3) January (1) December (2) November (2) October (2) September (2) August (4) July (2) June (7) May (3) April (4) March (2) February (1) January (6) December (4) November (4) October (4) September (2) August (4) July (5) June (3) May (6) April (6) March (6) February (4) January (5) December (7) November (8) October (14) September (29)
Is it rememberance?
ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးနှင့် သူ၏ Drawing များ (MEF_2nd_Anv_journal)
Weather_Condition @ Singapore
‎ဒီ Blog မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ မည်သည့် အကြောင်းအရာကို မဆို ရိုးသားစွာ ကူးယူသိမ်းဆည်းထား လိုပါက ကျွန်တော့်ထံမှ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရန် မလိုဘဲ ကူးယူ သိမ်းဆည်း ထားနိုင်ပါသည်။
ငွေကြေး အကျိုးအမြတ် တစုံတရာ အတွက် မည်သည့် media တွင် မည်သို့သော ပုံစံဖြင့် ဖြစ်စေ ပြန်လည် ဖော်ပြခြင်းကို ((( လုံးဝ ))) ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။ ဖော်ပြလိုပါက ခွင့်ပြုချက် ရယူရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ကျွန်တော် မပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဆိပ်ကမ်းတစ်နေရာဆိုပေမယ့် ဒီနေရာလေးမှာ အချို့အချို့သော သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ဘောင်ခတ်မှုတွေကနေ ကင်းလွတ်ဖို့အတွက် နောင် ebook နဲ့ software download link တွေကို တတ်နိုင်သမျှ မတင်တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်..။ စာအုပ်မိတ်ဆက် နဲ့ software မိတ်ဆက်လေးတွေအပြင် ၄င်းတို့နဲ့ သက်ဆိုင်မယ့် အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတော့ အလျင်းသင့်သလို စိတ်ဝင်စားနေမိတဲ့ အခြေအနေ အချိန်အခါအလိုက် တင်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
နားလည်မှုနဲ့ တည်ဆောက်တဲ့ ကမ္ဘာ
Civil Engineering ပညာရပ်ကို အနည်းငယ် လေ့လာနေတဲ့သူတစ်ဦးပါ..။ မွေးကတည်းက ဒီ field ထဲမှာပဲ ရှင်သန်ခဲ့တာ... နောက်ဆုံးအချိန်ထိလည်း ဒီ field ထဲမှာ နေခွင့်ရသွားဖို့ မျှော်လင့်နေမိတယ်...။ ဦးနှောက်ထဲက မှတ်သားထားမိတဲ့ အသိဥာဏ်တစ်ချို့နဲ့ နှလုံးသားထဲက ပညာရပ်တစ်ခုကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ကလွဲရင် ဘာမှလည်း မရှိပါဖူး။ ထူးထူးထွေထွေ ဘာမှလည်း ပိုမသိပါဖူး..။ သိနားလည်မိတဲ့ အတွေးလေးတွေကိုတော့ Positive altitude နဲ့ အားလုံးအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာတွေသာ မျှဝေလိုပါတယ်။ ကျွန်တော် မပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကျွန်တော့် ဆိပ်ကမ်းတစ်နေရာကို လာလည်တဲ့သူတွေအတွက် အတွေး တစ်နေရာမှာ တစ်စုံတစ်ရာ ကျန်ရစ်ခဲ့စေရင်ဖြင့် ဒီ blog လေး ဖန်ဆင်းရကျိုးနပ်ပါပြီ။ ဒီဆိပ်ကမ်း တစ်နေရာမှာ နိုင်ငံရေး နဲ့ ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ၊တစ်စုံတစ်ဦးကို ထိခိုက်စေသော အကြောင်းအရာများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို ထိခိုက်စေသော အကြောင်းအရာများမှ ကင်းလွတ်သော နေရာလေး ဖြစ်ဖို့တော့ မျှော်လင့်မိပါတယ်...။
By sharing the knowledge of others, we improve it.
By sharing the joy of others, we increase it.
By sharing the woe of others, we diminish it.".....
Created by John Moe Eain | . Powered by Blogger.